SoftBank ga azụrụ ARM maka nde dolla 31.000 | Gam akporosis
SoftBank dị na banyere ịzụta ibu ogwe aka, otu ụlọ ọrụ teknụzụ kachasị emetụta na mbara ala dịka ozi sitere na isi mmalite dị iche iche. All a pụtara ìhè ozi ọma maka ihe ogwe aka pụtara maka ụwa nke microprocessors ma ọ bụ ibe.
Companylọ ọrụ a bụ ọrụ maka ịwepụta mkpụrụ ego maka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụlọ ọrụ teknụzụ kachasị ukwuu n'ụwa, gụnyere Apple na Samsung, nke nwere ikikere nwere ihe karịrị aha 300 ma ruo ekesa 60.000 ijeri ibe dabere na teknụzụ ya taa.
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ Financial Times kwuru na SoftBank na-achọ ịzụta ARM maka 31.000 nde dollar. Nkwekọrịta a ga - abụ nke kachasị nweta ụlọ ọrụ teknụzụ nke Europe, ya mere ọ dịkwa mkpa maka ụwa a na ihe anyị ga - eme site na ịnwe ngwaọrụ ndị ahụ niile nwere ogwe aka ARM n'ime ibe.
Mbugharị a nwekwara ike iduga ụfọdụ n'ime ndị Refeyim dị ka Apple na Samsung ga-ebute mgbali iji nweta Intel. Ọ bụ otu ihe a nwere nnukwu asọmpi megide ARM na nke ahụ enweela ike ịgbakwunye ndị ahịa ọhụrụ maka ụlọ ọrụ ụgbọ ala na nke ahụ na-enyocha atụmatụ nke ibe iji mee ka ikike ndịna-emeputa nke smartphones dị elu.
Banyere nzụta, SoftBankc ga-akwụ £ 17 ego maka akụkụ ARM ọ bụla. Companylọ ọrụ a maara nke ọma maka ndị nhazi ya na-enye obere oriri gbasiri ike na nke dị na Apple iPhone na Apple Watch. Purchasezụta ihe na-abịa izu ole na ole United Kingdom họọrọ ịhapụ European Union.
Inweta a bu ihe ozo n’enye aka na ulo oru ndi ozo dika oge nkwado na nkà na ụzụ, ebe ọ bụ na ọ bụghị ọbụna ọnwa ndị gara aga Microsoft kwuputara nzụta nke LinkedIn maka 26.000 nde dollar.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » SoftBank banyere ịzụta ARM maka $ 31.000 ijeri